Mbola Rajaonah : Hanome fitaovana basikety ho an’i Manakara -
AccueilSongandinaMbola Rajaonah : Hanome fitaovana basikety ho an’i Manakara
Araka ny efa fantatra, dia notanterahina tao Manakara ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018, ny 24 febroary – 4 marsa teo. Tamin’izany indrindra no nampiasana ireo fitaovana manara-penitra fampiasa eo amin’ny fifaninanana basikety (panneaux), izay an’ny Tafita taty Antananarivo no nalefa nanatanterahana ny hetsika tany an-toerana.
Noho izany, dia nangatahin’ny mponin’i Manakara, indrindra ireo mpitia fanatanjahantena tamin’ny mpikarakara ny Tournoi Pangalanes 2018, ireo fitaovana ireo, saingy an’ny Tafita ireo fitaovana ka tsy maintsy naverina.
Araka izany, rehefa nifampiresaka tamin’ny mpanolotsaina manokan’ny Filoham-pirenena sady filohan’ny klioba basikety Ascut, Mbola Joseph Rajaonah, ny mpikarakara iny Tournoi Pangalanes 2018, izay teo ambany fiahian’ny Filohan’ny Repoblika, iny ny mpikarakara, ny kolonely Nicolas Jean-Patrick, voavaly ny fangatahan’izy ireo.
Voalaza mantsy fa horaisin’ny mpanolotsaina manokan’ny Filoham-pirenena, Mbola Rajaonah an-tanana ny mikasika ireo fitaovana fampiasa eo amin’ny taranja basikety ho an’i Manakara. Izany hoe, ireo “panneau” manara-penitra, toa ny an’ny Tafita fampiasa ao amin’ny lapan’ny fanatanjahantena, ahafahana milalao no ho azon’i Manakara amin’izany. Tsy vitan’izay ihany fa hanolotra baolina filalaovana ho an’ireo mpitia fanatantanjahantena ihany koa izy, raha ny fanazavana hatrany.
Ankoatra izay, raha ny mikasika ny Tournoi Pangalanes 2018 indray, dia hotanterahina ny alahady izao, any Antsirabe, ny lalao famaranana eo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lehilahy, hihaonan’ny GNBC Vakinankaratra sy ny Cosfa Analamanga. Any Mahajanga kosa indray no hanatanterahana ny lalao famaranana ho an’ny beach soccer, ny voalohandohan’ny volana mey izao, no hifandonan’i Morondava sy Toliara. Tsiahivina mantsy fa samy tsy nisy tontosa ireo lalao famaranana roa ireo noho ny toetr’andro tao Manakara, amin’izao fotoana izao.
Milaza ny hanao fanambarana goavana i Norbert Ratsirahonana amin’ity faran’ny herinandro ity. Antenaina araka izany fa hanao ampamoaka ny antony nisakanany ny jeneraly Camille Vital tsy ho kandidà mpisolo toerana an’i Andry Rajoelina, nandritra ny ...Tohiny